डा. केसीलाई पक्राउ गरिएकोमा प्रधानमन्त्री यसरी रिसाए, तत्काल रिहाइकाे लागी यस्ताे छ पहल ?
प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे आइजीपी प्रकाश अर्याललाई पनि सोधखोज गरेको र डा. केसीलाई सकेसम्म तत्काल रिहा गर्ने पहल थालेको प्रेस संयोजक परियारले संकेत गरे । अनलाइन खबरबाट
याे पनि पढ्नुहाेस् डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखियो, अब यस्तो सजाय हुन्छ ?